Spain By Train: Indlela To Thenga Amatikiti And More | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Spain By Train: Indlela To Thenga Amatikiti And More
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 11/12/2019)
Ukuba une iiveki ezimbini ukuya chitha Spain, enye yeendlela eziphambili ukuhambahamba ukuba ukuhlola Spain ngu Train. akayi kuphela oku kukuvumela ukuba ubone ezinye izinto ezimangalisa kwilizwe, kodwa umdla Uloliwe e Spain kakuhle kakhulu kwaye kulula. Enzima kakhulu ukuba uthenga le amatikiti etreyini. Eyona ndlela ibhetele uzithengela amatikiti etreyini to travel to Spain by Train is online. Kukho inani website ezikuvumela ukuba wenze le. Undoqo ukufumana umntu osebenza kakuhle kuwe ngokwemigaqo usebenziso olulula, ulwimi, kunye nohlahlo. Ukuthenga amatikiti bakho ikuvumela ukuba uthathe inzuzo iirhafu kunokwenzeka ezizodwa kunye nokuqiniseka ukuba ziyamkele koololiwe ofuna phambi kokuba babe ulihlawulele ngokupheleleyo.
Cwangcisa phambili babhukishe amatikiti zakho kwangaphambili ukuze ufumane okungcono ngaphandle kwe yokuhamba yakho uloliwe. Thatha ujongo kwi le weeveki ezimbini-hambo ngokuba ojikelezayo Spain ngu Train. Makube oku kuba sisikhokelo for uhambo lwakho elandelayo.
Spain wethu wokuqala yi Train yi Madrid (Days 1- 3)
Le likomkhulu Spanish kwaye umxube elungileyo zombini amatsha kunye namadala kunye, kunye neepaki eziphambili, shopping Amazing, vibey yasebusuku kwaye kunjalo i-Malasana ariya. Madrid naye ekhaya abaliqela waseSpeyin iimyuziyam eziphezulu. Mininzi imisebenzi yendlu eyaziwa kumazwe ngamazwe. Ngenxa yokuba kukho into eninzi yokwenza kwesi sixeko ukuze yakho 3 iintsuku apha uya kuba kakuhle elisetyenziswayo. Kuyinto isiqalo elungileyo uhambo lwakho kwiveki ezimbini yaye Kulula ukuba uloliwe ukuya naphi na apha. Kwakhona Madrid yeyona kakhulu elihle kwizikhululo zikaloliwe ku Spain.
Esi sixeko encinane kukuba eSpeyin ka-Basque Country kwaye ekunene kwi Bay of Biscay. Inikezela zombini amalwandle kunye kwentaba zonke ingqalelo emini, kodwa xa ubusuku kuza ukuba konke malunga Old Town apho uya kunandipha inqwaba imivalo pintxo kuba azincedi izitya ukuluma-ubungakanani. Musa siphuthelwe ukuhamba ngokuhlwa ecaleni Playa de la concha ziphethe pintxos kwi Town Old. Ukufumana ku San Sebastian kunye kwelaseSpani Train kulula njengoko kukho oololiwe ubuncinane ezine ukususela Madrid ngosuku ngalunye.
Esi sixeko ikhaya elawula Sathi sakubaleka ke le Bulls leyo ethatha iindawo ngoJulayi kunyaka ngamnye, kodwa kukho okuninzi kakhulu Pamplona ngaphezu koku. Kuba ibekwe phezu kwenduli kwiphondo Navarre okuthetha ukuba kukho iimbono eningenakukholwa yiyo le ezintabeni nezihlambo ngezantsi. Le dolophu encinane leyo eyenza kube lula ukuhamba kwaye uthabathe inxaxheba nakubugcisa amahle imbali. Kukho i bar oludlamkileyo yeTapas ndawo unyaka. Musa ndiphoswe uhambe ngokusebenzisa Old Town okanye retracing ukuhamba ngexesha Running kwe Bulls. Ekugcineni, lo mzi kwakhona ukufikelela ngokulula ukusuka San Sebastian kunye nomsila omfutshane train ride kude.
Spain ngu Train – Barcelona Qeqesha (Days 6 - 9)
Le Ocean-sixeko sibe sesinye sezixeko kakhulu kakuhle eyaziwa laye liyathandwa Spain, kwaye alidanisi! Enoba ufuna kobugcisa nenkcubeko, bokwakha, iintsuku amavila kwi beach, bonke ubusuku amaqela okanye ngokuxilonga nje isixeko esitsha, kukho into yokuba wonke e Barcelona. Musa akakuphosi Sagrada Familia, leyo yenye izakhiwo ezininzi kakhulu ehlabathini zanamhlanje. Spain ngu Uloliwe inika oololiwe qho Pamplona ukuya Barcelona kwaye akukho kuphela hambo lweeyure ezine phakathi kwezi zixeko zibini.
Kuphela nje Spain elifutshane yi Train usuka Barcelona, Valencia idla ngokungasiwa so yi abakhenkethi. Esi sixeko anabo ezininzi ukunikela kwaye kuluncedo uthatha ngosuku hlola bit. Kuyinto isixeko esihle ukuhamba ngapha kwaye ichibi okumangalisayo yaye ehamba migudu. Kuba abo babefuna into owenza ngakumbi kukho ukhetho ezininzi zokuqubha kunye Albufera Park. Musa ndiphoswe uhambe, kubaleka okanye izakurhangqa ngapha kwee Turia Gardens – enye iipaki inkulu yasezidolophini Spain. Kukho oololiwe eziliqela zibalekela imihla ukususela Barcelona ku Valencia.
Ukudibanisa ukuva iMeditera ngenkcubeko taka nophuhliso kunokwenzeka xa uhamba Spain ngu Train, Malaga zingafunyanwa kwi Costa Spain kwicala elisemazantsi del Sol. Eli ziko Isixeko ezintsha kwakhona kwaye idibanisa a yecawa Gothic kunye nezitalato ezincinane ngeenyawo ephakathi kunye imivalo zokutyela hip mihla. Malaga kwezinye amalwandle ngempela kutyelela kunye iintaba ezintle zilurhangqile. Ungaphoswa yanyukela i Gibralfaro Castle izimvo umoya-uthatha kwelanga elimangalisayo Andulasian nesixeko. Kukho oololiwe esebenzayo mihla Valencia ukuya Malaga.
Seville – Le yokugqibela enye kuluhlu lwethu lwe Spain ngu Train
Seville kuphela nje elifutshane ukukhwela uloliwe ukusuka Malaga kwaye kanye emangalisa. Cinga umva wamaRoma ukufumana ulwazi inkangeleko nemvakalelo kulo mzi kudibanisa imiba lamathuba amaninzi zembali. Kukho eninzi ukwenza esixekweni, ekuhloleni le dolophu ebhadula ecaleni Arenal ngekota emfuleni nokuhambela zokudla jasmay okanye ukubukela bullfight kwi ngomsesane sixeko zembali. Musa ndiphoswe utyelelo Cathedral Seville kunye Alcázar, neyathi yasetyenziswa ifilimu izicaphulo hit TV show Game of zobukhosi. Oololiwe run imihla ukususela Malaga ukuya Seville kwaye ukusuka Seville emva Madrid apho moya wamazwe ngamazwe.
Le veki ezimbini-hambo luya kukunceda wenze kakuhle uhambo lwakho uze uphonononge Spain ngu Train. amacebiso yethu kumatikiti nokubhukisha kaloliwe uya kuqinisekisa ukuba uyakwazi ukufumana apho ufuna ukuya nokuba iholide yakho ihamba kakuhle, ukuze wonwabe. Emveni kwakho konke, oko Ziziphi iiholide ngeyakho!
If you need other European Train Amatikiti, nqakraza nje Apha uye kwiwebhusayithi yethu kwaye onwabele ukhwele.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/spain-by-train/- (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml kwaye bangatshintsha / es / de okanye / ru kwiilwimi ezininzi.
oololiwe train Travel travelspain